Ahoana no hampitomboana ny fifamoivoizana blôginao - Victor Mochere
Nipoitra tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 ny bilaogy, ary nivoatra ho lasa fitaovana ara-barotra sarobidy sy lehibe. Na izany aza, ny fahazoana mpamaky no fanamby lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny bilaogera. Mety manana votoaty tsara ianao ao amin'ny blôginao, saingy tsy misy fifamoivoizana manan-danja. Tsy azonao antenaina fotsiny hoe hahita ny blôginao ny olona ary hanomboka hamaky azy io. Ny fifamoivoizana, amin'ny heviny tsotra indrindra, dia ny salan'isan'ny fitsidihana azon'ny blôginao mihoatra, ohatra, iray volana, mety ho herinandro, andro, ora, sns.
Mila mitondra fifamoivoizana tsara hatrany amin'ny blôginao ianao mba hahitana vokatra azo tsapain-tanana. Ny antony dia arakaraka ny fifamoivoizana azon'ny blôginao no ahazoanao vola bebe kokoa. Misy fomba roa lehibe hampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny blôginao: ara-boajanahary sy amin'ny alàlan'ny doka karama. Na dia mitaky fotoana sy faharetana ary ezaka be aza ny teo aloha, ny farany kosa, ny ankamaroany, dia mitaky vola. Ny tanjonao dia ny hamokatra fifamoivoizana mifandraika sy kendrena foana.
Ny ampahany lehibe amin'izany dia ny fahafantarana izay tianao hataon'ny olona rehefa tonga ao amin'ny blôginao izy ireo, zavatra iray ny faniriana fifamoivoizana bebe kokoa, saingy tsy maintsy misy antony izany. Rehefa manana hevitra mazava tsara momba ny zavatra tianao hataon'ny olona ao amin'ny blôginao ianao, dia azonao atao ny manatsara ny blôginao mba hanatsarana ny mety hitrangan'izany - ny tweaks kely dia afaka mitondra fiovana lehibe amin'ny fiovam-po.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny blôginao.
1. Ampiroborobo ny blôginao amin'ny media sosialy
2. Mifandraisa amin'ny bilaogera hafa
3. Valio ireo vaovao ao amin'ny blôginao
4. Mamorona votoaty sarobidy
5. Mamorona votoaty viraliny
6. Optimized ho an'ny fikarohana
7. Fivarotana tokana tokana
Toy ny amin'ny orinasa rehetra amin'izao fotoana izao, tsy ho voamarikao ianao raha tsy manana kaonty media sosialy. Manoro hevitra izahay hametraka pejy/kaonty ho an'ny blôginao ao amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ary na ny LinkedIn (raha ny tena marina dia orinasanao manokana ianao, sa tsy izany?). Manamboara ireo kaonty ireo amin'ny lamina/foto-kevitra mitovitovy amin'ny blôginao mba hirindra sy ho mora fantatra ny marikao.
Ampiasao izy ireo mba hizarana lahatsoratra vaovao ary manisy marika ireo bilaogera / influencer / orinasa izay mety hizara ny atiny ary hanampy azy hahatratra mpihaino marobe kokoa. Azonao atao ihany koa ny mitsambikina amin'ny dokam-barotra sasany karama mba hanampiana ny blôginao hahatratra mpihaino betsaka kokoa, na hanao fifaninanana hahazoana tiana bebe kokoa. Rehefa azonao ny mpanaraka dia tazony ho liana amin'ny famoahana tsy tapaka (fa tsy ho an'ny lahatsoratra bilaogy vaovao ihany).
Ampahafantaro olona hafa mitoraka bilaogy momba ny lohahevitra mitovy. Na dia eo aza ny maha mpifaninana ara-teknika anao, dia mety ho gaga ianao amin'ny maha-fanohanana ny vondrom-piarahamonina bilaogera. Maro amin'ireo bilaogera no manana pejy 'rohy' ao amin'ny tranokalany izay ampiasainy hampifandraisana amin'ireo namany marobe ao anatin'ny vondrom-piarahamonina ho setrin'ny rohy ao amin'ny blôginao manokana. Hanampy betsaka amin'ny SEO-nao izany (izany no fanatsarana ny motera fikarohana – mety ho hipoitra amin'ny fikarohana Google ny blôginao). Raha mifandray amin'ny bilaogera hafa ianao ary mizara ny atiny, dia azo inoana fa hamerina ilay sitraka izy ireo - afaka miasa amin'ny fiaraha-miasa sasany mihitsy aza ianao.
Raha misy zavatra mitranga amin'ny vaovao mifandraika amin'ny niche anao dia midira. Ity no antsointsika hoe 'newsjacking' ary mety hahafinaritra anao izany. Afaka miditra amin'ny media sosialy ianao mba hilaza ny bitikao amin'ny tenifototra mifandraika amin'izany, mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ary manatona ny mpanao gazety mihitsy aza mba hilaza fa afaka maneho hevitra ianao. Raha tena mahay manana ny niche ianao dia mety ho tonga aminao mihitsy aza ny mpanao gazety.
Aza manoratra votoaty satria momba ny niche anao fotsiny. Fa kosa, tokony hanoratra votoaty ho an'ny mpamaky anao ianao. Inona no tian'izy ireo hianarana bebe kokoa? Ahoana no hanampianao azy ireo handray andraikitra? Azonao atao ny mampiasa fitaovana toy ny fikarohana teny fanalahidy hahitana raha karohin'ny mpihaino anao ny lohahevitry ny lahatsoratra bilaoginao. Tokony hijery ny lohahevitry ny bilaoginao ao amin'ny Google koa ianao mba hahitana hoe karazana lahatsoratra bilaogy nosoratana momba azy ireo.
Ny famoronana votoaty viraliny dia hanampy anao hahatratra tsena vaovao ary hampitombo ny mpamaky anao. Mety ho mora kokoa noho ny atao izany, fa ny fanalahidin'ny famoronana votoaty virtoaly dia ny mikaroka lohahevitra mampiady hevitra na be resaka mifandraika amin'ny sehatry ny fitorahana bilaogy niche - araka ny azonao eritreretina, matetika izany dia tafiditra amin'ny newsjacking. Satria ity no niche-nao, dia ho liana ianao, be herim-po ary mahay momba izany, mba hahafahanao mametraka hevitra tian'ny olona hovakiana, zaraina ary resahina.
Mety ho feno fampahalalana tsara ny lahatsoratra ao amin'ny blôginao, fa raha tsy misy laharana amin'ny fikarohana dia tsy hisy hahita izany. Vaovao ratsy izany raha te hahazo fifamoivoizana bebe kokoa ianao. Saingy soa ihany fa tsy sarotra izany optimize ho an'ny fikarohana. Mba hanombohana dia mila teny fanalahidy tsara ianao, tranokala haingana, ary sary namboarina. Zahao hoe ny fomba fampiasana SEO hanatsarana ny laharan'ny tranokala.
Raha te hampitombo ny blôginao ianao dia mila misongadina amin'ny olon-drehetra. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana varotra tokana (USP). Ny USP dia zavatra mampiavaka ny blôginao amin'ny olon-drehetra – nahoana no misy olona mamaky ny blôginao mihoatra ny hafa? Ahoana àry no ahitanao ny USP anao manokana? Ampidino amin'ny zavatra manokana ny lohahevitry ny blôginao. Noho izany, raha tokony hamorona bilaogy fanatanjahan-tena ho an'ny sokajin-taona rehetra ianao, dia afaka mamorona bilaogy fanazaran-tena isan'andro ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite. Ity lohahevitra ity dia manokana, nefa mipaka amin'ny vondron'olona marobe.
Top 10 bilaogy niches izay mahazo vola 2022